कोरोनाको सन्त्राससंगै मुल्यबृद्धि ? « Anumodan National Daily
कोरोनाको सन्त्राससंगै मुल्यबृद्धि ?
प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७६, बुधबार १३:२५
विश्वव्यापी महामारीको रुप धारण गरेको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका अति विकशित र शक्तिशाली मानिएका मुलुकहरु पनि सकसमा परिरहेका छन् । चीन, अमेरिका, इटली, अष्टेलिया, बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इरान, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड लगायतका विश्वभरीका एक सय बढि मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हायलकायल भइरहेको अवस्था छ । त्यस्तै, विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा कोरोना भाइरसको कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव परेको अवस्था छ । यतिवेला पुरै विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त भइरहेको वेला यता यसैलाई अवसर बनाएर लोभीपापीहरू रातारात मालामाल हुने दुस्प्रयासमा रहेको देखिदैछ । युरोप, अमेरिकातिर मानिसहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्न तछाडमछाड गरिरहेका समाचारहरु प्रकाशन, प्रसारण भइरहेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको र उनी उपचारपछि स्वस्थ भइसकेको आधिकारिक तथ्यांक हो । तर, बाहिरी मुलुक खासगरी खुला सिमाना रहेको भारतबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर रोकथामका सबै प्रभावकारी प्रयास जारी राख्नु नै पर्दछ ।
यससंगै अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रासका आडमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव देखाउने तथा कालोबजारी गर्ने तत्वहरु सल्बलाउन थालेको देखिदैछ । खासगरी खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावको छनक देखिन थालेको छ । त्यसै पनि यस पटक प्रतिकुल मौसम, पटकपटकको हिउदे वर्षा, हिमपात र अहिले केही स्थानमा परेको असिनाबृष्टिका कारण हिउदे बाली नराम्ररी नोक्सान भएको अवस्था छ । विगतको तुलनामा यस पटक तरकारीको मुल्य निकै चर्को भएको छ । त्यसैमा कोरोना भाइरसको अनावश्यक होहल्ला मच्चाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना गर्ने र त्यसैको आडमा मुल्यबृद्धि गर्ने दुस्प्रयास भइरहेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको भ्रामक हल्ला फैलाएर उपभोक्ताहरू पनि बढिभन्दा बढि सामग्रीको जोहो गरिरहेको देखिदैछ । तर, स्थानीय प्रशासनसहित सम्वद्ध निकाय यसप्रति गम्भीर भएको पाइदैन । फलतः गलत तत्वहरुले कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा उपभोक्तालाई ठग्ने अवसर पाइरहेका छन् ।
अहिले सकसको अवस्था छ । आम मानिस त्रसित रहेको अवस्था छ । एक किसिमको हडबडीको वातावरण देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आआफ्नो स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दैनिक अवस्थाबारे आम मानिसलाई सत्थयतथ्य सूचित गर्ने भरपर्दो र प्रभावकारी सूचना प्रवाह संयन्त्र बनाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा आम मानिस दिनहु विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह हुने भ्रामक समाचारलाई नै सत्य मानेर झन् भयग्रस्त भइरहेको अवस्था छ । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावको अवस्था त्यतिधेरै भयावह भइसकेको छैन, तर समयमै स्थानीय प्रशासन तथा सरकारहरुले उचित पाइला चाल्न सकेनन् भने कृत्रिम अभाव र त्यसका आडमा हुने मुल्यबृद्धि नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ भन्नेमा सचेत हुनु जरुरी छ । त्यसैले बजार अनुगमन, खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न सहितको दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारणको अवस्था, आयातको स्थिति तथा आपूर्तिको अवस्था लगायतको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा कुनै पनि किसिमको कृत्रिम अभावलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नेतर्फ समयमै उचित प्रयास आवश्यक भइसकेको छ ।
सेतीमा ९७ जनाकोे कोरोना परीक्षण गर्दा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि
धनगढी । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको
सेती प्रयोगशालामा शुक्रबार एक सय जनामा कोरोना पुष्टि
धनगढी । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार एक सय जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ अस्पतालले कोरोनाको नि:शूल्क उपचार गर्ने
धनगढी । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालसहित निजी तथा मेडिकल कलेजमा समेत कोरोना संक्रमितको
सेती प्रयोगशालामा १७९ नमूना परीक्षण गर्दा ८६ जनामा कोरोना पुष्टि
धनगढी । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बिहिबार ८६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि